Izindaba - Imakethe ye-calcium chloride powder engenamanzi ikubone kaningi ukukhula okumangazayo kumayunithi ebhizinisi wabadlali abakhulu
Imakethe ye-calcium chloride powder engenamanzi ifakazela ukukhula okuqinile. I-Western Chemical Corporation iqeda ukutholwa kwe-Anadarko Petroleum Corporation ngama-US $ 55 billion
I-calcium chloride isetshenziswa kakhulu ekwakheni amapulasitiki, injoloba nezinye izinto zokwakha ezishisayo. Ingasetshenziswa njengesengezo noma ingxenye ezintweni ezahlukahlukene zamakhemikhali. Ingangezwa ku-antifreeze, udizili, uphethiloli, uwoyela wokwenziwa, upende, i-varnish, i-polyurethane, izinto zokuthambisa, ama-sealants, ama-pesticides neminye imikhiqizo eminingi. Yize le mikhiqizo ingadingi amazinga okushisa aphezulu ukuze ingezwe noma isuswe, idinga ukugcinwa endaweni engenamswakama namazinga okushisa adlulele. Muva nje, imboni yendwangu inesidingo esinamandla se-calcium chloride powder. Imvamisa isetshenziswa njenge-ejenti yokulinganisa kanye nokulungiselela izixazululo ze-brine kwimishini yesiqandisi. Eminyakeni edlule, noma ngabe kumnotho othuthukile noma osafufusa, imboni yezindwangu ibe ngomunye wezimboni ezethembisayo ngokwenani nobungako. Ngokwemininingwane evela kwi-Indian Brand Equity Foundation (IBEF), imakethe yezindwangu nezingubo zaseNdiya yayinenani elingu-US $ 100 billion ngo-2019, laqasha cishe abasebenzi abayizigidi ezingama-45 ezweni lonke. Ngakho-ke, lezi zinto zingakhuthaza ukukhula kwemakethe ye-calcium chloride powder engenamanzi.
Thola ikhophi eyisampula yalo mbiko wemakethe @ https: //www.coherentmarketinsights.com/insight/request-sample/1788
Ngokuya ngonyawo lokuma komhlaba, isifunda sase-Asia-Pacific besinesidingo esikhulu se-anhydrous chloride powder iminyaka eminingi. Lokhu kungenxa yokuthi imboni yamakhemikhali ibikhula ngokuqinile. Ngaphezu kwalokho, iNyakatho Melika yamukela inani elikhulu le-anhydrous chloride powder. Ukukhula okusheshayo komkhakha wemithi kungakhuthaza ukukhula kwemakethe yesifunda i-anhydrous chloride powder kungekudala.
Muva nje, ngoMeyi 2019, iWestern Chemical Corporation, umphakeli waseMelika wemikhiqizo ye-calcium chloride, ithole i-Anadarko Petroleum nge-US $ 55 billion.
I-calcium chloride powder ingenye yamalungiselelo e-calcium anhydrous asetshenziswa kakhulu ezimbonini ezahlukahlukene. Itholakala kuma-powders amaningi ajwayelekile, njenge-Epsom salt, i-magnesium sulfate, ne-rock salt. Le nhlanganisela ye-powdery inokusetshenziswa okuhlukahlukene futhi ingasetshenziswa ezinhlelweni ezahlukahlukene. Ngokufanayo, ezinye izimboni zokugcina ezifana nemboni yamakhemikhali, imithi, udayi, njll nazo zinezinga eliphakeme lokutholwa le-anhydrous calcium chloride powder. Kwezokwelapha, le mpuphu isetshenziswa kakhulu njenge-electrolyte substitute kanye ne-anti-allergen agent. Ngakho-ke, lezi zinto ezithandekayo zingakhuthaza ukukhula kwemakethe ye-calcium chloride powder engenamanzi esikhathini esizayo esiseduze.
Yize kunesidingo esikhulu se-calcium chloride powder, i-anhydrous calcium chloride powder, isitoreji sayo sidinga izimo ezithile ngoba singakwazi ukumunca umswakama emoyeni bese siyiguqula ibe yi-brine liquid. Ngakho-ke, iziqukathi ezikhethekile ziyadingeka ukugcina ikhwalithi yomkhiqizo ngesikhathi sokugcina. Ngakho-ke, lobu bunzima buzokhawulela ukukhula kwemakethe ye-calcium chloride powder engenamanzi.